कहाँ हरायो प्रधानमन्त्रीको झण्डावाला गाडी ? — Imandarmedia.com
कहाँ हरायो प्रधानमन्त्रीको झण्डावाला गाडी ?
चितवन। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले चितवनमा झरेपछि निजी गाडीमा सवार भएका छन्। नेपाली कांग्रेसका सभापति देउवा पार्टीको कामका लागि आएकाले भरतपुर विमानस्थलबाट आफू बसेको होटेलसम्म निजी गाडीमा पुगेका हुन्।
प्रधानमन्त्री देउवा यहाँ आउनुअघि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा बिहीबार सत्ता गठबन्धनले गर्न लागेको सभामा प्रधानमन्त्रीले आचारसंहिता उल्लङ्घन गरेर आउन लागेको भन्दै उजुरी परेको थियो।
कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य उमेश श्रेष्ठको बा३च २०४० नं. को ल्याण्डक्रुजर गाडीमा देउवा होटेल पुगेका थिए। श्रेष्ठले निर्वाचन आचारसंहिता पालना गर्दै पार्टी सभापतिसमेत रहेका देउवा झण्डाबिना आफ्नो गाडीमा सवार भएको बताए।
उनले भने, यहाँ रहँदा सभापतिज्यू निजी गाडीमा हिँडडुल गर्नुहुन्छ। श्रेष्ठका अनुसार देउवा यहाँ रहँदा पार्टीको व्यवस्थापनमा बस्नेछन्। उनले भने, सबै खर्च पार्टीले गर्नेछ।
सभापति देउवा र उहाँको समूह रहेको होटेल सिराइचुलीका मुख्य सञ्चालक श्रेष्ठ नै हुन्। पार्टी सभापति देउवा आज विराटनगरबाट नेपाली सेनाको एनए ०६२ कल साइन रहेको जहाजबाट आएका हुन्।
उनका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द परियारका अनुसार सो जहाज नेपाली कांग्रेसले भाडामा ल्याएको हो। उनले भने, निर्वाचन आयोगसँग अनुमति लिएर पार्टीले भाडामा जहाज ल्याएको हो। जिल्लामा सत्ता गठबन्धनले गर्न लागेको जनसभालाई सम्बोधन गर्न देउवा आएका हुन्।
उनीसँगै पार्टीका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पनि आज आएका छन्। सभालाई नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालसहितका नेताले सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम छ।
भरतपुर महानगरपालिकामा गठबन्धनका तर्फबाट माओवादी केन्द्रका नेतृ रेनु दाहाल प्रमुख पदमा उम्मेदवार हुन्। त्यस्तै उपप्रमुख पदमा नेपाली कांग्रेसबाट चित्रसेन अधिकारी उम्मेदवार बनेका छन्।
त्यस्तै, दैलेख जिल्लाको ठाटीकाँध गाउँपालिकामा नेकपा एकीकृत समाजवादीको सिंगो गाउँ कमिटी नै रित्तिएको छ। उक्त पालीकाको पुरै कमिटिनै नेकपा एमालेमा समाहित भएपछि सिंगो पालिका नै रित्तिएको हो।
बुधबार एक संयुक्त विज्ञप्ती जारी गर्दै नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको ठाटीकाँध गाउँ कमिटी नै एमालेमा समाहित भएको छ।
नेकपा एमाले ठाटीकाँध गाउँपालिका कमिटीका अध्यक्ष कुमारविक्रम शाही र नेकप एकीकृत समाजवादी ठाटीकाँध गाउँपालिकाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद जैसीले संयुक्त विज्ञप्ती जारी गरि जानकारी दिएका हुन्।
विज्ञप्तीमा ठाटीकाँध गाउँपालिकाको समृद्धि, उन्नती, प्रगती र नमूना गाउँपालिका निर्माणका लागि तथा भावीपुस्ताको सुन्दर भविष्यको लागि पार्टी एकताको विकल्प नभएको ठहर गरिएको उल्लेख छ।
स्थानीयतह सदस्य निर्वाचन २०७९ अन्तर्गत नेकपा९एकीकृत समाजवादी० पार्टीबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुको उम्मेदवारी निस्किृय रहने र नेकपा एमालेकातर्फबाट उम्मेदवारी दिएका उम्मेदवारहरुलाई विजयी गराउने र परिणाममुखी भूमिका निर्वाह गर्ने जानकारी गराउँदै,
नेकपा एकीकृत समाजवादी नेकपा एमाले ठाटीकाँध गाउँपालिका कमिटिमा पार्टी एकतासहित समाहित भएको छ, विज्ञप्तीमा भनिएको छ।एमालेमा समाहित भएका नेकपा ९एकीकृत समाजवादी०का नेताहरुलाई एमाले केन्द्रीय सदस्य राजबहादुर बुढा,
कर्णाली प्रदेश कमिटी अध्यक्ष विनोदकुमार शाह, एमाले नेताहरु सुर्यबहादुर शाही, धीरबहादुर शाही, एमालेकोतर्फबाट ठाटीकाँध गाउँपालिकाको अध्यक्षको उम्मेदवार लक्ष्मीदेवी शाहलगायतको उपस्थितीमा स्वागत गरिएको छ।